I-china cast iron frying pan ngesibambo esisodwa sokhuni akulula ukunamathela ngaphandle kokumboza Ukwakha kanye nefektri | ISANXIA
I-pan yensimbi yensimbi enesibambo sokhuni esisodwa akulula ukunamathela ngaphandle kokumboza
Incazelo:Φ320 * 95mm
Ngezansi kwebhodwe:Ungakhetha phansi okuyindilinga noma okuyisicaba
Wenziwe ehlanzekile ingulube yensimbi ukuhlangabezana namazinga okhokhelwayo. Inempilo futhi iyasebenziseka. Akulula ukugqekeza ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Kuyimbiza edingekayo cishe kuyo yonke imindeni.
Lapho kuphekwa, ukuqhutshwa kokushisa kufana, ilambu elincane lincane, kuthi ngezansi kwebhodwe kukhulu, okugcina kahle ukushisa. Ngakho-ke, izinto zokudla akulula ukunamathisela, futhi zingaphekwa ngokushesha, okungagcina ngokuphelele umsoco. Izitsha ezithosiwe zimnandi futhi zinambitheka kamnandi.
Izinto zokusetshenziswa zensimbi yengulube enokuhlanzeka okuphezulu zikhethwe ngokuqinile. Ngokuhlolwa okuningi, kuqinisekiswa ukuthi kuzoba ukusakaza okunempilo nokufanelekayo. Okokuqala, izopholishwa ngemishini ezenzakalelayo, bese kuthi ekugcineni, ipholishwe ngomsebenzi wezandla. Ubuso bebhodwe bushelelezi futhi isibambo sihle kakhulu. Akukho ukumbozwa kwamakhemikhali ebhodweni, ngakho-ke akulula ukugqwala. Ubukhulu bembiza budizayinwe ngokucophelela, ngakho-ke busebenza kangcono ekuqhubeni ukushisa nasekugcinweni kokushisa.
Isibambo senziwe ngekhwalithi emnyama emnyama esezingeni eliphakeme ngokuthungwa kwemvelo nokumelana nokushisa okuphezulu. Akulula ukukhubazeka nokuqhekeka ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Kuyahambisana nombala womzimba wensimbi yensimbi. Kuyinto elula futhi ekhululekile ukuyibamba. Inamandla amakhulu wokuthwala futhi izinze kakhulu.
Indlebe ye-pan ihlanganiswe nomzimba wepani. Izinto ezifanayo zensimbi azesabi ukushisa okuphezulu. Iqinile ngokwengeziwe. Akudingeki ukhathazeke ngokuthi uzobhakwa yisitofu lapho upheka. Lapho uhambisa ukuphela, ungasebenzisa amagilavu ​​we-anti scalding.
Ibhodwe lingenziwa ngokucaciswa okuhlukile, phansi kungaba yindilinga phansi, noma phansi kuyisicaba, ungakhetha ngokuya ngezidingo zakho. Ngaphezu kwalokho, isembozo sinesivalo sokhuni nesivalo sengilazi esiqinisiwe, isitayela naso sikuwe.
Langaphambilini Ubisi Embizeni Cast Iron koqweqwe lwawo Casserole Non-Stick ukuthosa Pan Baby Frying Pan Baby Complementary Ukudla Hot Ubisi Noodle Embizeni
Olandelayo: Ihhavini laseDashi elinempilo linekhono lokupheka elihle kakhulu
16l Engagqwali Ukuthosa Pan 316l
lat Ngezansi kwe-Iron Frying Pan
igama le-Pan Frying Pan
igama le-Pan Non Frying Pan
Ayikho i-Pan Stir Fry Pan
insimbi engafakwanga Turkey Fryer Embizeni
Urkey Fryer Insimbi Engagqwali
Ihhavini laseDashi elinempilo linokupheka okuhle kakhulu ...
Ama-double iron iron cast iron iron skillets awina iGerm ...
Isembozo se-pan yensimbi eyingqayizivele ingasetshenziswa njenge ...
uNamel Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, i-Cast Iron Skillet enamanzi, I-xtreme Iron Skillet, i-Iron Iron Skillet engathinti, I-Iron Iron Skillet,